Nwere LMDE KDE Live DVD 201207 | Site na Linux
LMDE KDE Live DVD 201207 dị
A ole na ole gara aga, m na-ekwu banyere mmalite nke Linux Mint KDE 13 RC, ma ugbu a, m wetara gị ozi ọzọ dịka ya. Ọ na-apụta na onye ọrụ (na onye njikwa oge) site na forum nke Mint Linux, imepụta ụdị maka LMDE dabere na KDE.
Enwere ihe ọzọ SolusOS ma obu ihe yiri ya? Amaghị m, mana atụmatụ ahụ ka na-atọ ndị ọrụ nke desktọọpụ German ụtọ. Onye ọrụ mara dị ka Schoelje Ya na ndi otu ndi ozo nyere nkwado, o nwewo ike idozi otutu njehie ndi ozo plasma, Ọfọn na ụlọ ahịa akwụkwọ gtk. Ọzọkwa, tinye Udochukwu na mmelite na Nyocha Debian ha anaghị eweta nsogbu ọ bụla.
Ihe mgbakwunye ndi ozo, tunyere Mint KDE Linux:
Sgfxi (maka ndị chọrọ ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala Nvidia: ALT + CTRL + F1, banye dị ka mgbọrọgwụ, pịnyere sgfxi)
Ọ bụrụ na ịchọta nsogbu ọ bụla ma ọ bụ nwee echiche maka mmelite LMDE KDE unofficial, ị nwere ike gwa ya site na njikọ a.
Iyi: LMDE KDE 32-ibe (1.3Gb)
Iyi: LMDE KDE 64-ibe (1.3Gb)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » LMDE KDE Live DVD 201207 dị
Ọ dị mma, enwere m olile anya na a na-emelite ya oge niile dị ka nnwale ma ghara ịhapụ ọrụ ahụ ma ọ bụghị na anyị ga-enwe ọgba aghara siri ike na-anwale ule, ma ọ bụ site na chi bụ ihe m kwuru 0.0
cheta usoro a
kwụsie ike + ule = ejighị n'aka nke oge.
Otu dị ka nke a chọrọ. Ma ọ bụrụ na ọ ga - adị ka Gnome (na - enweghị mmelite na - agbanwe agbanwe mgbe niile), ọ ga - abụ “ezi echiche” ọzọ nke ga - adịgide naanị ya. Agba distro ahụ nke ọma.
Zaghachi Angelo Gabriel Marquez Maldonado
M nso adịghị nso LM, ma m na-aghọta na ezi oru si ya echiche. SolusOS, nke na-adịghị amasị m ma e wezụga maka okike nke nchekwa ọhụrụ ya (dị ka launpad) nke m chere na ọ bụ ihe ịga nke ọma, sitere na Linux Mint. Ugbu a, anyị nwere ike ịhụ ngalaba ọzọ nke LMDE, ugbu a na KDE; olile anya na ọ na-eto.
Otu akụkụ nke masịrị m sọftụwia kachasị mma bụ sọftụwia ya na ọtụtụ ya. ọ ga-abụ ozi ọma maka ndị na-achọ LMDE ma họrọ KDE.
Ọ bụrụ na ị kwuo na ụdị a apụtala, ekwenyere m ya, mana ahụrụ m 404 Not Found mgbe ị na-achọ ibudata iyi ...
ok, ha na-arụ ọrụ 😛
Kedu ụdị KDE ọ ga-eweta? Na Arch m jiri 4.8.4-2 na sistemụ ahụ siri ike dịka okwute.
Enwere ike m ga-anwale ya ka m hụ otu o si aga, ọrụ lmde ahụ dị m ka ọ bụ ihe ịga nke ọma nye m, agbanyeghị na ugbu a ọ dị na doldrums.
Ọ ga-ewe ọnwa abụọ.
Agbalịrị m ya ma ọ na-aga nke ọma, n'eziokwu, ọ na-arụ ọrụ kacha mma Linux Mint 12 KDE (RC nke 13 agbabeghị m ya ugbu a)
Mhhh, iji distro kde ka mma chakra, ma ọ bụrụ na ọ bụghị emepeuse ma ọ bụ fedora, mana ndị ọzọ na nkenke ..., ha dị ka igbu oge.
Ihe dị ka igbu oge nye m bụ ịwụnye oghere ma ọ bụ fedora na na otu afọ nkwado ahụ ga-agwụ. Obere ihe m masịrị * buntu bụ nkwado LTS ...
OpenSuse na Fedora nwere nkwado ogologo oge ga-abụ mkpisi. Ma, n'ezie, ọ bụrụ na ha enye nkwado dị otú ahụ, ngalaba azụmahịa nke ma distro ga-akwụsị ịba uru ...
Naanị m wụnye ya na ọ na-aga nke ọma, mana ọ ga-adị mkpa imelite kde 4.8
@xykyz nke ahụ bụ ihe evergreen bụ maka
Amaghị m na enwere ike, ma ọ bụrụ na m wụnye OpenSuse 12.1 nwere olile anya mgbe ahụ nwee ike iji ebe nchekwa mgbe niile? N'ihi na ọ bụrụ na m nwere ike iji 11.2 na 11.4 mee ihe ọjọọ, ọ ka bụ nkwado dị mkpirikpi maka m ...
@xykyz erubeghị maka 12.1 n'ihi na ọ ka nwere nkwado, mgbe nkwado ahụ na-akwụsị bụ mgbe evergreen na-abanye.
na dị ka ikwu okwu, enwerekwa tumbleweed nke ga-abụ ịhapụ nnabata maka openSUSE.
na o yiri ka ihe na-akpali, Otú ọ dị, iji a Rolling realease, M ga-arapara n'ahụ Arch 😛
Linggbagharị bụ otu uru GNU / Linux kachasị amasị, ọ bụ ezie na anaghị m anwale Arch, Debian na-anwale m karịa na source.list na ule.
sieg84, imere ihe onyonyo 3D nke profaịlụ gi?
Naanị m wụnye ya mana ọ bụ ezie na Mozilla na Thunderbird na ngwa ndị ọzọ m na-etinye na-adị n'asụsụ Spanish, sistemụ niile dị n'asụsụ Bekee ma enweghị nhọrọ iji wụnye ọtụtụ asụsụ; Onwere onye gha enyere m aka? M bụ onye rookie rookie ...
Nwere ike ibudata LMDE KDE si http://www.schoelje.nl
Edere ibe a na Bekee mana ị nwere ike ide m na Spanish.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịwụnye Spanish na sistemụ gị:
apt-get install kde-l10n-es firefox-l10n-es thunderbird-l10n-es libreoffice-l10n-es libreoffice-enyemaka-es aspell-es
htaccess [Redirect]: Iwu, ụkpụrụ, na-achịkwa ọdịnaya gị bipụtara na netwọkụ
Bash akwukwọ iji mee nkwado ndabere nke ihe gị dị mkpa